Zvikonzero nei musingafarire bonde semurume nemukadzi | Bezzia
Maria Jose Roldan | 31/08/2021 22:10 | Zvepabonde
Kune vanhu vazhinji, kurara nemumwe wako hakufadze zvachose. Pane zvinhu zvinoverengeka zvinogona kukanganisa maitiro ekurara nemunhu waunoda. Kunetsekana kwezuva nezuva kushushikana kunogona kuve chimwe chezvikonzero nei munhu asingafarire bonde.
Munyaya inotevera tinokupa dzakatevedzana zvikonzero nei zvingave zvakaoma kunakidzwa nebonde semurume nemukadzi uye zvekuita kuti izvi zvisaitike.
1 Sei kune vanhu vasinganakirwe pabonde nemumwe wavo
1.1 Kushungurudzika kugutsa mumwe wako
1.2 Tambura kubva kune mamwe epanyama zvivakwa
1.3 Kucherechedza kusvika kune orgasm
1.4 Tambura kusangana nekutsi kwemukadzi kuoma
Sei kune vanhu vasinganakirwe pabonde nemumwe wavo
Bonde chinhu pakati pezviviri uye zvakakosha kuti mafaro akabatana. Nekudaro, kune dzimwe nguva dzekuti kunyangwe uchiita bonde nemunhu waunoda, mufaro wacho hauna kuzara. Kana izvi zvikaitika kazhinji, zvinogona kukanganisa maitiro mune ramangwana rakanaka revaviri ava. Tichazotaura newe nezve zvimwe zvezvikonzero zvekugutsikana kwepabonde uye maitiro ekuzviita.
Kushungurudzika kugutsa mumwe wako
Pane nguva apo imwe yemapato inotarisa zvakanyanya kugutsa mudiwa uye kukanganwa nezvayo. Zvese izvi zvinogona kuburitsa yakakwira mamhepo yekushushikana uye kushushikana kunoguma kuve nekukanganisa kwakashata kana zvasvika pakuita bonde. Kudzivirira izvi kuti zviitike, munhu wacho anofanira kuzorora zvakakwana uye kuita zvizere kuita zvebonde. Pabonde, mapato ese anofanira kupa pamwe nekugamuchira.
Tambura kubva kune mamwe epanyama zvivakwa
Kutambura kubva kune mamwe masisitimu epanyama kunogona kuita kuti munhu asakwanise kuita hukama hwepabonde hwakazara nemumwe wake. Iwe unofanirwa kusiya aya macomputer padivi uye unakirwe pabonde newaunoda. Hazvina zvazvinobatsira kuzvitongesa pamusoro pechimwe chinhu uye kutambura imwe nhanho yekushushikana kana uchiita bonde nemumwe wako.
Kucherechedza kusvika kune orgasm
Pane dzimwe nguva, kusagutsikana uku kunokonzerwa nekushushikana kweimwe yemapato kusvika pagasm. Iwe unofunga nezve yako yega orgasm uye neyeumwe wako, zvinotungamira kune yakanyanya kushushikana mamiriro isina kunaka kuve nehunhu bonde. Izvo hazvidi kuti usvike kanagasm paunenge uchinakidzwa pamubhedha nemumwe wako. Dzimwe nguva bonde rinogona kunakidzwa kunyangwe usinga svike kumagumo.
Tambura kusangana nekutsi kwemukadzi kuoma
Vaginal kuoma ndechimwe chinhu kana chinhu chinogona kudzivirira vakadzi kubva kunakidzwa nebonde. Kuoma munzvimbo yemukadzi kunokonzeresa kuti kusangana pabonde kuve kunorwadza uye hakugone kuve nenzvimbo yekunakidzwa. Kana izvi zvikaitika, zvinokurudzirwa kushandisa mafuta ekuzora kunzvenga kurwadziwa kwakadai.
Muchidimbu, bonde rinofanira kuve chimwe chinhu chinonakidza kune vese vanhu vari mukati mevaviri. Izvo hazvigone kuve kuti iyo nguva yekuita bonde inova chimwe chinhu chinotyisa uye kuti haina kuburitsa chero kugutsikana kune mumwe wemapati. Izvo zvakakosha kuti uwane chinokonzera kana chikonzero chinoita kuti bonde risafadze uye uwane mhinduro inoshanda. Iyo nguva yekuita bonde yakakosha mukati mevaviri uye inofanira kuzadzikiswa kuti inguva inonakidza uye yakakosha kune vese mapato.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Zvepabonde » Zvikonzero nei musingafarire bonde semurume nemukadzi
Izvo zvakanakira minimalism yehutano hwepfungwa